आन्तरिक मा मोज़ेक सजावटको प्रयोग सधैँ असामान्य र रोचक बनाउँछ। मोजेकको सहयोगमा, तपाईंले सम्पूर्ण तस्बिरहरू, पर्खाल प्यानलहरू , फर्श र पर्खालको कालीका नक्कलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। र मोज़ेक विभिन्न कोठाहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
स्नानघरको लागि सिरेमिक टाइल-मोज़ेक
बाथरूम सिरेमिक टाइल-मोज़ेक धेरै लोकप्रिय छ, किनभने यो सबै आवश्यक गुणहरू छन् - नमी प्रतिरोध, तापमान परिवर्तनको प्रभाव अन्तर्गत कुनै विकृति, सजावटी, व्यावहारिकता र स्थायित्व।
आधुनिक मोज़ेक न केवल सिरेमिक बनाइन्छ, गिलास टाइल-मोज़ेक एकदम लोकप्रिय छ। त्यो बिल्कुल नमी देखि डराउने छैन, जो एक कोठा को लागि महत्वपूर्ण छ जहाँ पर्खालहरु अनन्त रूपमा पानी संग संपर्क गर्दछ। यसबाहेक, यस्तो टाइल टिकाऊ र टिकाऊ छ, र बाथरूम, यस्ता सामग्रीसँग सजाय, धेरै स्टाइलिश र प्रभावकारी देखिन्छ।
भान्साको लागि सिरेमिक टाइल-मोज़ेक
एप्रन क्षेत्र मा सिरेमिक टाइल-मोज़ेक पनि एकदम व्यावहारिक र सजावटी छ। यो सामान्य ठूलो सिरेमिक टाइलको aprons को लागि एक योग्य विकल्प हो।
यस अवस्थामा, मोज़ेक एप्रन मोनोक्रोम हुन सक्छ, तर एकै रंगको फरक आकारको मिश्रण हुन सक्छ। अधिक जटिल र रोचक विकल्पहरू ढाल हो, जब हल्का टन्ट देखि हल्का एक वा एक प्यानलको रूपमा क्रमशः संक्रमण हो, जब मोजेकले ढाँचा वा ढाँचाको रूपमा व्यवस्थित गरेको हुन्छ।
फर्शको लागि सिरेमिक टाइल-मोज़ेक
एक विशेष प्रकार को सिरेमिक मोज़ेक फर्श छ। परिष्करणको यो विधि अनियमितता, दागहरू, दरबारहरू, विभिन्न रंगका ब्लूटूथहरूमा हुन सक्छ। मोज़ेक फर्श धेरै टिकाऊ र टिकाऊ छ
सरल विकल्पहरू तयार पारिएको टुक्राहरूमा आधारित हुन्छन्, जुन चाँडो र सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा - टूटा सिरेमिक टाइलको एक मोज़ेक। यसको बिस्तार मैनुअल श्रम हो, धेरै श्रमिक र अपमानजनक। व्यक्तिगत टुक्राहरूबाट चित्रहरू सिर्जना गर्न यस्तो व्यवसाय एक रोमाञ्चक शौक र पैसा कमाउने राम्रो तरिका हुन सक्छ।
आफ्नै हातमा तालिका
ग्रे कोष्ठक बोर्ड
प्रोन्टेंसको शैलीमा लैंप
फर्निचरका लागि कृत्रिम छाला
भित्ता शैली आन्तरिक मा
आफ्नै हातले घरको ढोकाको स्थापना
एक गृहमा "सिटी" को पर्खाल-पत्र
आन्तरिक मा स्ट्रिप गरिएको वालपेपर
लगगमा फ्लोरिडाको फर्म
फर्नीचर - कुर्सियां
थ्रोम्बोन ACC - प्रयोगको लागि संकेत
काया गर्बर सिंडी क्र्रार्डफोर्डसँग उनको आमाको सौन्दर्य रहस्य छ
गर्भवती महिलाहरु को लागि व्यायाम को जटिलता
पाईने बीउको खुर्सानी
ढक्कन शराब -6वार्मिङ्ग पेय बनाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जन
रोजमेरी - एक अपार्टमेन्टमा बढ्दै
डुङ्गाको बारेमा कस्तो सपना छ?
कब्जानुसार कसरी व्यवहार गर्ने?
विकास र मोनिका बेलुकी को वजन - स्त्रीत्व को व्यक्तित्व
घरमा पिज्जा कसरी बनाउने?
हस्की बाहिर बिहे बाहिर आउनुभयो, र अब तिनीमाथि कुकुर छैन भन्ने कुरामा शङ्का छैन!
पोर्कको साथ पायलवको लागि नुस्खा - सरल उत्पादनहरूबाट कसरी स्वादिष्ट पाक बनाउने?
केटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो
माला मारी नेशनल पार्क
टेलर स्विफ्ट र केनी वेस्टको बीचमा विवादमा नयाँ प्रवेशकर्ताहरू